Ungase abafuni ukukholelwa ukuthi lezi ezimbi kungase kwenzeke kuwe, kodwa udinga alungele kungenzeka ukuthi, noma kothandekayo, kuzodinga ukuba bathole ukunakekelwa kwezokwelapha kuyilapho kude nasekhaya. Kungakhathaliseki ukuthi akulula njengoba igawula ezinyweni lakho, spraining iqakala wakho, eza phansi ngomkhuhlane, noma ukumelwa yinhliziyo, ethola ukwelashwa okudingayo kungenzeka kungabi lula njengoba kungaba e-United States.
Ukuthola okuningi imininingwane ngokuhamba umshuwalense wezokwelapha nokuthi kungani kufanele ucabange ngokuwuthola, bheka Umhlahlandlela oluqukethwe lapha ngezansi.
umshwalense wezokwelapha • Ukuvakasha iyahluka kwenye ejwayelekile nomshuwalense travel ikakhulukazi ukuthi alinikezi Ukusabalala izindleko ezihlobene nokukhansela, ukubambezeleka, noma iziphazamiso.
• Lezi zinqubomgomo ngokuvamile ukunikeza efinyelela lokho ubhekwa ukhiye yezokwelapha izindleko. Lezi zihlanganisa egunjini labadinga usizo oluphuthumayo ukuvakashelwa, izinsizakalo zokuphuma, futhi zokuthutha izindleko ezivelayo ukufinyelela isikhungo sokwelapha ezifanele.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Kunayo Ziyamangalisa Amanyuvesi EYurophu” ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-need-for-travel-medical-insurance%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)